China Backpack T-B3164 Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU yemafashoni dhizaini bhegi
Unyanzvi: Iri bhegi remudzidzi rine hukuru huviri, rinosangana nezvinodiwa zvakasiyana.Imwe saizi iri 28 * 18 * 41cm (L * W * H), iine yega laptop komputa inokwana kusvika 14 ″ laptop. Iyo imwe saizi iri 31 * 17 * 47cm (L * W * H), ine yakasarudzika laptop komputa inokwana kusvika 15.6 ″ laptop. Laptop mupanda uri pasi pefudzi bhandi, ichikupa imwe chengetedzo. Kamuri hombe hombe ine machira mazhinji inopa nzvimbo yakakwana yezvaunoda zvezuva nezuva sembatya, mabhuku, zvikwama, mapiritsi uye zvichingodaro.Rutivi rwemberi rwemberi diki zipi muhomwe ndeyekuwana nyore nyore zvinhu zvinowanzoshandiswa.
Hunhu hweMhando: Iyo bhegi reUSB rakagadzirwa nesplashproof & kukwenya isingagone oxford, iyo yakasimba uye eco-inoshamwaridzika. Iyo isina mvura yakapetwa kaviri nzira mbiri yekuvhura yakakiya zipi yeiyo huru kamuri inopa kaviri anti-kuba dziviriro parwendo rwako.
Iri bhizinesi laptop bhegi isarudzo yakanaka kune chero chinangwa, bhizinesi, kufamba, chikoro, kunotenga, hupenyu hwezuva nezuva, kudzika musasa, pikiniki. Gamuchirai kutenga neTIGERNU.
Model Nhamba T-B3164
Ruvara: Dema, Orenji, Grey
Saizi: 17 inches: L31 * W17 * H47cm
14 inches: L28 * W18 * H41cm
Inokodzera saizi yelaptop: 14 inches 24 * 32cm / 17 inches 26 * 40cm
Zvinhu: Splashproof & muvare nemishonga 300D * 300D Polyester
Feature: Kukwanisa kukuru; Splashproof
Pashure: Mukwende T-B3143
Zvadaro: Mukwende T-B3176Nylon
yezororo bhizinesi kukwira makomo Hiking Backpack
multifunctional laptop bhegi yekushandisa kwemazuva ese
tigernu anti kuba bhegi yevarume
Muchinjikwa Bhegi T-S8097
Yekufambisa Bhegi T-N1018